पार्टीको झण्डा ओढाउदै गरियो भण्डारीको अन्तिम संस्कार-Nagarikaawaj.com
पार्टीको झण्डा ओढाउदै गरियो भण्डारीको अन्तिम संस्कार
बुटवल, पुस ४ ।
कलाकार तथा सञ्चारकर्मी दलबहादुर भण्डारीको मंगलबार दाहसंस्कार गरिएको छ । गत पुस २ गते बुटवलको अस्पताल लाईनमा टिप्परको ठक्करका कारण भण्डारीको निधन भएको थियो ।
जेनस अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएका भण्डारीको स्थानीय मगरघाटमा अन्तिम दाहासंस्कार गरिएको हो । दाहासंस्कार गर्नुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाको पार्टी कार्यालय चन्द्रनगरबाट स्व. भण्डारीको शव यात्रा निकालिएको थियो ।
नेकपा मसालका पार्टी प्रवक्ता विमल शर्माले पार्टीको झण्डा ओडाएर अन्तिम श्रदाञ्जली दिएपछि दाहासंस्कार गरिएको थियो ।
नेकपा मसालका प्रवक्ता विमल शर्माले पार्टी सदस्य तथा जिम्मेवार नेताको निधनले पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै अपुरणीय क्षति पुगेको बताउनुभयो ।
स्व.भण्डारीप्रति श्रदाञ्जली अपर्ण गर्दै शोकलाई शक्तिमा बदलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउंदै प्रवक्ता शर्माले घरपरिवार, आफन्तजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभयो ।
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सञ्चार र मजदुर क्षेत्रमा परिचित ५१ वर्षिय स्व. भण्डारी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा मसालका स्थानीय नेतासमेत हुनुहुन्छ ।
नेकपा मसाल रुपन्देही जिल्ला समितिका सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सल्लाहाकार, प्रगतिशील पत्रकार संघ रुपन्देहीका सल्लाहाकारको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । नेकपा मसालमा स्रमाट नामबाट परिचित स्व. भण्डारी २०५५ देखि पार्टी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायत कालदेखि नै कम्युनिष्टप्रति आस्थावान भण्डारी पञ्चायतका पालादेखि नै रक्तिम सांस्कृतिक अभियानमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यही पुस २ गते बिहान बुटवलको अस्पताललाईबाट जेब्रा क्रस गरी चादवारी आफ्नो घरतर्फ जांदैगर्दा टिप्परले ठक्कर दिएको थियो । दाहासंस्कार गर्नुअघि विद्यार्थी नेता बिमल पोखरेलले स्व. भण्डारीको जीवनीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सञ्चारकर्मी भण्डारीको ट्रिपरको ठक्करबाट निधन